Imaamka Mudullood oo ka hadlay boobka kursiga HOP067 | KEYDMEDIA ONLINE
Muqdisho, Soomaaliya - Imaamka beesha Mudulood, Imaam Maxamed Yuusuf Cali, ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay, sheegashada Cabdullaahi Geedi Shadoor, ee ku aaddan inuu yahay odayga iyo saxiixaha kuraasta Golaha Shacabka ee beesha Marrooyin, oo ka tirsan Wacaysle, Abgaal.
Imaamku, wuxuu xusay in saxiixaha kursiga HOP067, ee soo shaqeynaayay ku dhawaad 20-kii sano ee la soo dhaafay la garab maray isla-markaasna, Dhuusamareeb lagu boqray Cabdullaahi Geedi Shadoor, oo aan shaqo ku lahayn saxiixa kursiga.
Wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay in la garab maro Nabaddoon Cali Jeesto, [Saxiixaha kursiga HOP067] oo nool, lana sameeyo hoggaan cusub oo aan cidi dooran kana warqabin.
“Ninkii yiri Cali Xasan Cali [Jesto], odaygii Wacaysle maaha, Allaha kama cabsan, anna waxaan caddeynayaa inuu soo jireen yahay oo aday Matrrooyin, Wacaysle, Abgaal iyo Muddullood yahay”. Ayuu yiri Imaam Maxamed.
Nabaddoon Cali Jeesto, oo dhankiisa hadlay, ayaa isna sheegay in xitaa loo diiday inuu u safro Dhuusamareeb, lana hor istaagay socdaalkiisa xilli uu doonayay inuu ka ambabaxo Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho.
“Waxaan ka mid ahaa odayashii la soo shaqeyay 135-tii oday , waxaan ahay saxiixaha kursiga ku asteysan beelaha Marooyin, waxaan ahaa odayaashii qoray ergada baarlamaankii 10-ad ee kursiga beesha, haddi la yiri nabaddoonnada ayuu saxiixu ku koomaa, waxaan ahay ninka 1-aad ee leh”. Ayuu isna yiri”. Nabaddoon Cali Jeesto.
Axmed Guuleed iyo Cabdiaxmaan Tuuryare, oo labaduba ka mid ah musharixiinta doorashada laga hor istaagay ayaa sheegay in ay Kooxda Madaxtooyada deggan ee Farmaajo hoggaamiyo, horjoogayaasha Galmudug iyo Guddiga doorashada ay iska kaashadeen boobka kursiga HOP067,.
“Dooashada Soomaaliya waxa ay isku bedeshay fal-danbied, Musharixiinta waraaqaha ay ka qoreen waan aragnay, umadda kale ee Soomaaliyeed ee wax galka ah, waxaan rajeyneynaa in ay falkaas wax ka yiraahdaan,” Ayuu yiri Taliyihii hore ee NISA, Tuuryare.
Guddiga Xallinta Khilaafaaadka Doorashada Dadban (GXKHDD) ayaa dhawaan shaaciyay in dacwo laga keenay kursiga sumaddiisu tahay HOP067, kaasoo Dhuusamareeb loogu boobay eedeysane Yaasiin Farey.